I-EA040 - i-OMG 3 in 1 Wireless Nurse Call Caregiver Pager, i-SOS ebiza isistimu ye-alamu, isibani sasebusuku se-Motion sensor - i-OMG Solutions
I-3 ku-1 Smart Cordless Receiver + ukuhamba kwensuku yokukhanya kwensuku ebusuku + Umhlengikazi Call Umhlinzeki Pager, SOS ukubiza uqaphile multi-function alarm system DIY kit
Ukucaciswa Technical I-Smart Night Light Inkinobho yokudonsa I-SOS Button
Amandla kagesi I-DC 6V (i-CR123A ibhetri * i-2) I-DC 3V (i-2032 inkinobho yebhethri * 2) I-DC 3V (i-2032 inkinobho yebhethri * 2)
ivolumu 90dB / /
Ibanga lomqulu I-4-Level / /
Ama-chimes 52 / /
Hamba-nge-yamanje 170μA / /
Imvamisa engenantambo 868MHz 868MHz 868MHz
Ibanga elingenantambo ≤300m (endaweni evulekile) ≤300m (endaweni evulekile) ≤300m (endaweni evulekile)
manzi Shanyisa ukungena kwamanzi Shanyisa ukungena kwamanzi Shanyisa ukungena kwamanzi
Umamukeli wethu unikwe amandla amakhulu okusindisa amabhethri we-CR123A (afakiwe) okuphi ukuphila okufinyelela ezinsukwini ze-365. Iyakwazi ukusebenzisa futhi ulondoloze imali yakho. I-Lighted Sound Light I-Alarm design uma umamukeli ekhala. Ngeke uthole okufanayo emakethe.
Amathoni weringisi adumile ne-4-Level of azilungiswe volume: Izingoma ezidumile zomhlaba ongakhetha kuzo ngokuya ngezimo zakho ezihlukile; 4 amazinga wevolumu eguquguqukayo esuka ku-0db-90db
Ibhetri inikwe amandla okusebenzisa amandla aphansi: ingasebenza ngemodi yokulinda iminyaka engaphezulu kwe-1.
Ibanga elide Led flash: Ukukhanya kwe-LED eluhlaza okwesibhakabhaka ku-receiver (iyunithi eyinhloko) kuzokhipha isibonakaliso se-ringtone + uma kuphazamisa inkinobho yokucindezela noma inkinobho yokwesaba, ngeke uphinde ulahlekelwe isenzakalo, esingafanelwe ngokukhethekile kubantu abanokuzwa okuncane.
Ukufakwa okuphathekayo nokulula: Azikho izintambo ezidingekayo, yonke imikhiqizo ingafakwa nge-bracket eneziboshwa noma ngesitika esodongeni. I-Transmitter ye-Call Button incane ngokwanele ukuba igqoke njengesikhumba, ithathwe ephaketheni, noma ifakwe embhedeni noma ungayithatha noma kuphi kalula.
Umklamo wamanzi: Inkinobho yokusunduza ilinganiswe njenge-splash engenamanzi yokusetshenziswa kwangaphandle.
Ububanzi besicelo: Ungayisebenzisa kuzo zonke izindawo ezifana nemakhaya, ihotela, ihhovisi, indlu, indlu, ekilasini, igumbi nokunye.
Inkinobho ye-Panic yeSOS: Ilungele Kokubili uMnakekeli Nesineke / Abadala / Abahlali / Abakhubazekile / Abagulayo. Ibavumela ukuthi bacele Usizo ekhaya. Akudingeki ukuthi umemeze ukuze unakwe ngothile. Isipho esibonelela umndeni wakho osekhulile noma ogulayo.
Cindezela inkinobho ye-SOS imizuzwana emi-5, isistimu izongena esiteshini sokuvikela izikhali bese imisa i-alamu.
Ukubuka okuphelele kwe-3960 Ukubuka kwe-1 Namuhla